ချင်းပြည်နယ်တွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ မြင့်တက်လာ | ဧရာဝတီ
ချင်းပြည်နယ်တွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ မြင့်တက်လာ
ကြယ်ပြာ| December 15, 2012 | Hits:1,154
2 | | တွန်းဇံနှင့် တီးတိန်မြို့တို့တွင် ဘိန်းအဓိက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေကြပြီး ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရ ဧက ၃၅၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးသူများပြားလာပြီး လူငယ်များကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ပမာဏ မြင့်တက်လာနေခြင်းကြောင့် ချင်းအမျိုးသားပါတီနှင့် NGO များ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၃ တွင် စစ်တမ်းကောက် ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တွန်းဇံနှင့် တီးတိန်မြို့တို့တွင် ဘိန်းအဓိက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေကြပြီး ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်များအရ ဧက ၃၅၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း ချင်းအမျိုးသားပါတီမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆလိုင်း ကျဲဘစ်ခ်ထောင်းက ပြောသည်။
ချင်းအမျိုးသား ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ၎င်းပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သော ဘိန်းနှိမ်နင်းရေး ကော်မရှင် တခု ဖွဲ့စည်ပေးရန် အဆိုတင်သွင်းခဲ့သော်လည်း ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ဘိန်းနှိမ်နင်းရေးများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကာ အဆိုကို ပယ်ချခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“အဲဒီတုန်းက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က တွန်းဇံမှာ သွားပြီးတော့ ဘိန်းကို ပြည်တောင်း ၁၅၀ ကျော်လောက် သိမ်းလိုက်တယ်။ ဒီဘိန်းတွေ ကိုဘယ်နားမှာ သိမ်းထားလိုက်လဲ ကျနော်တို့တွေမသိဘူး” ဟု ဆလိုင်းကျဲဘစ်ခ်ထောင်းက ဆိုသည်။
ချင်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ ဧရာဝတီမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းအား လက်ခံဖြေကြားပေးခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ဘိန်းကို အဓိက စိုက်ပျိုးနေသူများသည် မဏိပူရ်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာပြည်အတွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက် နေထိုင်နေကြသော ကသည်းလက်နက်ကိုင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု လျော့ပါးလျှက် ရှိကြောင်း၊ တရားဝင် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့ကာ နှိမ်နင်းခြင်းမရှိဘဲ တခါတရံမှသာလျှင် ဘိန်းအနည်းအကျဉ်း ရောင်းသော လူများကို ဖမ်းဆီးခြင်းသာ တွေ့နေရခြင်းကြောင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပေါ် ယုံကြည်ရန် ခဲယဉ်းနေကြောင်း ချင်းနိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀န်းက ပြောဆိုကြသည်။
“ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ဘိန်းစိုက်တာက ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ လာသင်ပေးလို့ တတ်သွားတာဗျ။ အခု ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ဘိန်းစိုက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းက မကြာခင်မှာပဲ ရှမ်းနဲ့ ကချင်ကို မီတော့မှာ” ဟု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောသည်။
ချင်းတိုင်းရင်းသားများ ဦးစီးပြီး ပြည်မြို့၊ ကလေးမြိုနှင့် ပလက်ဝ မြို့နယ်တို့တွင် ချင်းကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံကာ Chin Youth Forum ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ မြေပြန့်ဒေသများ၌ လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံရခြင်း၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲကြောင့် စာသင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း များသာ ရှိသော်လည်း၊ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် သာမန် အလုပ်များထက် ၀င်ငွေကောင်းသော ဘိန်းစိုက်ခင်းများတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ ဘိန်းစွဲနေခြင်းသည် အများစုဖြစ်နေကြောင်း Chin Youth Forum မှ တာဝန်ခံ ကိုဒေးဗစ်က ဆိုသည်။
အစိုးရ၏ တရားဝင် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၅ သိန်းကျော်ရှိသော ပြည်နယ်တခုဖြစ်သော်လည်း တက္ကသိုလ် မရှိခြင်း၊တခြားဒေသများ၌ တက္ကသိုလ်တက်ရာတွင် ကုန်ကျစားရိတ် များခြင်းကြောင့် ကျောင်းဆက်တက်နိုင်သူ နည်းပါးခြင်းနှင့် ဘာသာရေး ပွဲတော်များ ကျင်းပခွင့်အား ပိတ်ပင်ခံနေရခြင်းများ ရှိသည်။
ပြည်နယ်အတွင်း၌ ပုဂ္ဂလိက လျှပ်စစ်မီးကိုသာ အဓိက သုံးစွဲနေရခြင်းကြောင့် အကြီးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ ၀င်မလာဘဲ ဖြစ်နေရာ ပညာတတ် လူငယ်များရှိသော်လည်း တောင်ယာစိုက်ခြင်း၊ နယ်စပ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်း ဖြင့်သာ အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းပြုသူ များကြကြောင်း၊ ပညာမတတ်သူ အများစုမှာ ပြည်ပသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်လိုသူ များကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် တခြားသော ပြည်နယ်များကဲ့သို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားများ သဘောကျနိုင်သော နေရာပတ်ဝန်းကျင်များ ရှိသော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲဆုံး ဒေသဖြစ်ခြင်း၊ နယ်မြေလုံခြုံမှု အားနည်းခြင်းနှင့် နယ်မြေအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် အာဏာပိုင်များဘက်မှ တင်းကျပ်ထားခြင်းတို့ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်လာနိုင်ခြင်း နည်းပါးလျက် ရှိသည်။
ဟားခါးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးငွါမောင်က “အခု ချင်းပြည်နယ်မှာ ပထမဆုံး လေယာဉ်ကွင်း လုပ်ပေးဖို့ ဟားခါးမြို့နားမှာ မြေတိုင်းတာနေပါပြီ။ ဟားခါးနားမှာက ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ နာမည်ကြီး အသဲနှလုံးပုံ ရိဒ်ရေကန်အပြင် တခြားလည်စရာ နေရာတွေလည်း ရှိနေတော့ ဒါကြီးပြီးရင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ပွင့်လာမယ်ထင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းကို လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် စတင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ချပြသွားရန် ရှိကြောင်းနှင့် ဘိန်းစိုက်ရာ နေရာအနီးတွင်ရှိသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တခု ဖြစ်သည့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)နှင့်လည်း အစိုးရတို့ မကြာသေးမီက ရန်ကုန်မြို့၌ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး ထားခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့ထံမှ အကူအညီများလည်း ရရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ချင်းအမျိုးသားပါတီ၏ လူမျိုးစု စစ်တမ်းအရ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် ချင်းတိုင်းရင်းသား ၁၂ သိန်းခန့်ရှိရာမှ ယခုအခါတွင် ၈ သိန်းဝန်းကျင်ခန့်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ပဲခူးတိုင်း မုန်းမြို့တွင်လည်း အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပြန်
ကယားပြည်နယ် အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု များလာ
ဘိန်းကို မတားဆီးနိုင်လျှင် လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုးခွင့်ပြုရန် ပအို့ဝ်ပါတီ တောင်းဆို
မိုင်းဆတ်မှာ ကျပ်သိန်းပေါင်း သောင်းချီ တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူနဲ့ လက်နက်တွေဖမ်းမိ
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Salai Lian December 15, 2012 - 12:09 pm	Democracy is not coming into Chinland that much yet but opium steps in first. It is so sad. Opium will not make the Chin people great but bring them down. Money oriented people will do even killing for money. It is the beginning of destroying the future. Burmese government and the UN need to tackle, especially the Chin State government needs to outlaw and eradicate before it is too late. Rebel group from Northeastern India is fully responsible for this opium production in Chin State. These people must not be allowed to run this horrific business.
Reply	ohnmar December 15, 2012 - 1:15 pm	ချင်းလူမျိုးတွေအချင်းချင်း(နိုင်ငံရပ်ခြားေ၇ာက်သွားလို့ကောင်းစားသွားတဲ့ချင်းတွေ)
ရှိနေမှတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဟိုးတုံးကဘိန်းမစိုက်ရင် ဖန်ဆီဒိုင်းကယ်ရီလုပ်တာချင်းတက္ကသိုလ်
Reply	Salai Lian December 15, 2012 - 11:43 pm	This is absolutely true. US and Aussie are becoming like Chin States abroad.
Reply	Shwe Yoe December 16, 2012 - 10:58 am	The Chins have passed the test. They practice well what they have been taught by the Myanmars since 1962.
တာချီလိတ်တွင် တရက်တည်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ ၄ ကြိမ် ဆက်တိုက် ဖမ်းမိ
စစ်တွေ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု အဓိကတရားခံ မကြာမီ ဖမ်းဆီးမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ပြော
ကချင်ဒေသ ဘိန်းပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း ရက္ခိုင့် တပ်မတော်(AA) ငြင်းဆို
ကချင်ဒေသ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်နိုင်မလား
လွှတ်တော်အမတ် ၂ ဦးနဲ့ ရှမ်းမြောက်တောင်တန်း မူးယစ်နယ်မြေ
ဘိန်းစိုက် တောင်သူတွေလည်း ပြောင်းလဲချိန်ကို စောင့်မျှော်နေ